ဝါတွင်း (၃)လ ..ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်တဲ့ ..ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ – ရှအေလငျး
ဝါတွင်း (၃)လ ..ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်တဲ့ ..ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ
စိပ်ရမဲ့ ရက်လေးတွေ သက်မှတ်ပြီးပါပြီ
အချိန်လည်း တိတိကျကျ စိပ်စရာမလိုပါဘူး
နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်
သက်သက်လွတ်စား အချိန်တိကျရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ
16.7. 2019. မှ
24 .7. 2019 အထိ
အရဟံ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
25 . 7. 2019 . မှ
2 . 8 . 2019 . အထိ
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
3 . 8 . 2019. မှ
11 . 8 . 2019 . အထိ
ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
12. 8 . 2019 . မှ
20 . 8 . 2019 .နေ့အထိ
သုဂတော သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
21 . 8. 2019 . မှ
29 . 8 . 2019 . နေ့အထိ __________________________
လောကဝိဒူ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
30 . 8 . 2019 . မှ
7.9. 2019 . နေ့အထိ
အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
8 .9. 2019. မှ
16.9. 2019. နေ့အထိ
သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
17 .9. 2019 . မှ
25 .9. 2019 . အထိ
ဗုဒ္ဓေါ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
26 .9. 2019. မှ
4 . 10 . 2019 . အထိ
ဘဂဝါ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ်
5 . 10 . 2019. မှ
13. 10 . 2019 . ထိ
စိပျရမဲ့ ရကျလေးတှေ သကျမှတျပွီးပါပွီ
အခြိနျလညျး တိတိကကြ စိပျစရာမလိုပါဘူး
နတေို့ငျး မှနျမှနျစိပျဖို့ပဲ လိုပါတယျ
သကျသကျလှတျစား အခြိနျတိကရြငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ
16.7. 2019. မှ
အရဟံ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
25 . 7. 2019 . မှ
သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓေါ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
3 . 8 . 2019. မှ
ဝိဇ်ဇာစရဏသမ်ပန်နော သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
12. 8 . 2019 . မှ
20 . 8 . 2019 .နအေ့ထိ
သုဂတော သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
21 . 8. 2019 . မှ
29 . 8 . 2019 . နအေ့ထိ __________________________
လောကဝိဒူ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
30 . 8 . 2019 . မှ
7.9. 2019 . နအေ့ထိ
အနုတ်တရောပုရိသဒမ်မသာရထိ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
8 .9. 2019. မှ
16.9. 2019. နအေ့ထိ
သတ်ထာဒဝေမနုဿာနံ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
17 .9. 2019 . မှ
ဗုဒ်ဓေါ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
26 .9. 2019. မှ
ဘဂဝါ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ
5 . 10 . 2019. မှ
မရှိရင်တောင်းစားလိုက်မယ် စပွန်ဆာမယူဘူးလိုပြောလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ………..
‘အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အစီအစဉ်မရှိတော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကြောက်သွားပါပြီ။” လို့ ပြောလာတဲ့ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)
ဒီနေ့ အင်တာနက်မှာ ပြန်နှံ့နေတဲ့ ထိန့်လန့်ဖွယ် လူပေါင်း ၁၁ ယောက် တပြိုင်တည်း သေကြောင်းကြံမှုကြီး 😱
မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ …အမျိုးသားများအတွက်… ကြက်သွန်ဖြူလာပါပြီ….
မိုးအောင်ရင်လွတ်လာလို့… ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို …သာသာနဲ့နာနာ…...
ဆရာမကြီး ဒေါ်မာမာမြင့်မှ.. ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသည့်...